Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara radieshon anyanwụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyanwụ sitere n’anyanwụ bụ ihe dị mkpa gbasara ihu igwe nke na - enyere aka ịmata oke “okpomoku” anyị ga-enweta n’anyanwụ n’elu ụwa. A na-agbanwe oke ikuku a nke radieshon site na mgbanwe ihu igwe na njigide gas.
Mbara igwe anwu nwere ike ikpo ala ala na ihe (ọbụna nke anyị) na-enweghị ike ikpo ikuku. Ọzọkwa, mgbanwe a dị ezigbo mkpa iji nyochaa ọrụ anyị na-arụ n'ọgụ megide mgbanwe ihu igwe. Youchọrọ ịma ihe niile gbasara radieshon nke anyanwụ?
1 Anyanwụ radiesh gafere ikuku
2 Ahụ niile na-ewepụta ụzarị ọkụ
3 Kedu ka ụzarị anyanwụ si arụ ọrụ
4 Kedu ka anyị si atụ radieshon?
5 Mbara igwe radieshon na ụba griin haus mmetụta
6 Anyanwụ radieshon na mgbanwe ihu igwe
Anyanwụ radiesh gafere ikuku
Mgbe anyị rutere n'ụsọ osimiri na otu n'ime ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ, anyị dinara "anyanwụ." Dika anyi noro na akwa ahu ogologo oge, anyi n’ahu otu aru si eme ka aru di oku ma mekwaa okpomoku ya, rue mgbe anyi ga asa ahu ma obu banye na ndo n’ihi na anyi enwu oku. Kedu ihe mere ebe a, ọ bụrụ na ikuku anaghị ekpo ọkụ? Ihe merenụ bụ na Anyanwụ agafeela ikuku anyị ma mee ka ahụ́ anyị na-ekpo ọkụ nke ukwuu.
Ihe dịka ihe na - eme anyị n’ọnọdụ a bụ ihe na - eme n’uwa a: ikuku dịkarịsịrị ‘nghọta’ na radieshon nke anyanwụ, mana elu ụwa na ahụ ndị ọzọ dị n’elu ya na-amịkọrọ ya. Ike nke Anyanwụ bufere ụwa bụ ihe a maara dị ka radiant ike ma ọ bụ radieshon. Radieshon na-aga site na mbara igwe n'ụdị ebili mmiri nke na-ebu ike. Dabere n’otú ume ha na-ebu, a na-ekewa ha gburugburu ụdị akpa ahụ. Anyị nwere ebili mmiri kachasị ike dịka ụzarị gamma, ụzarị ọkụ X ray na ultraviolet, yana ndị nwere obere ume dịka infrared, microwaves na redio.
Ahụ niile na-ewepụta ụzarị ọkụ
Ahụ niile na-ewepụta radieshon dabere na ọnọdụ okpomọkụ ha. Nke a nyere site Stefan-Boltzmann iwu nke na-ekwu na ume nke ahụ na-ewepụta dabara n ’ike nke anọ nke okpomoku ya. Nke a bụ ihe kpatara ma Anyanwụ, osisi na-ere ọkụ, ahụ nke anyị na ọbụnadị akpụrụ mmiri na-aga n'ihu na-ewepụta ike.
Nke a na - eduga anyị ịjụ onwe anyị ajụjụ: gịnị kpatara anyị ji nwee ike “ịhụ” radieshon nke anyanwụ ma ọ bụ mpempe osisi na-ere ọkụ na anyị enweghị ike ịhụ nke anyị sitere, elu ụwa ma ọ bụ ibe nke ice? Nakwa, nke a na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ nke onye ọ bụla n'ime ha ruru, ya mere, oke ike nke ha kachasị wepụta. Igwe dị elu nke ahụ dị elu, nke ka ukwuu na ume ha na-ebute na ebili mmiri ha, ọ bụ ya mere ha ga-eji hụkwuo anya.
Anyanwụ dị na okpomọkụ nke 6.000 K ma na-ewepụta radieshon tumadi na ebili mmiri nke ebe a na-ahụ anya (nke a na-akpọkarị ebili mmiri), ọ na-ewepụkwa radiesị ultraviolet (nke nwere ike karịa ma ọ bụ ya mere ọ ji ere akpụkpọ anyị na ngosipụta dị ogologo) na Ezumike ndị ọzọ ọ na-ewepụta bụ radieshon infrared nke mmadụ na-anaghị ahụ. Ọ bụ ya mere na anyị enweghị ike ịmata radieshon nke ahụ anyị na-ewepụta. Ahụ mmadụ dị ihe dị ka ogo 37 Celsius na radieshon ọ na-ewepụta dị na infrared.
Kedu ka ụzarị anyanwụ si arụ ọrụ
O doro anya na ịmara na ahụ na-eme ka ụzarị ọkụ na ume na-aga n'ihu ga-ewetara gị ajụjụ ọzọ. Gịnị mere, ọ bụrụ na ahụ́ na-ewepụta ume na ụzarị ọkụ, ọ́ naghị eji nwayọọ nwayọọ ajụ oyi? Azịza nye ajụjụ a dị mfe: mgbe ha na-ewepụta ume, ha na-amịkọrọkwa ya. E nwere iwu ọzọ, nke bụ nke itule radiative, nke na-ekwu na ihe na-ewepụta otu ike ọ na-amịkọrọ, ọ bụ ya mere ha ji enwe ike ijigide okpomọkụ mgbe niile.
Ya mere, n'ime sistemụ ụwa anyị - usoro usoro na - ewere ọnọdụ ebe a na - etinye ume, na - egosipụta ma na - egosipụta, nke mere na nhazi nke ikpeazu n’etiti radieshon nke rutere n’elu ikuku site na Anyanwu na nke na apu na mbara igwe bu efu. Yabụ, nkezi kwa afọ okpomọkụ na-anọgide mgbe nile. Mgbe radieshon nke anyanwụ batara n’uwa, ọtụtụ n’ime ya na –eche n’elu ụwa. Obere ihe nke ikuku radiation ahụ bụ igwe ojii na ikuku na-etinye obi gị dum. A na-egosipụta radieshon ndị ọzọ site na elu, gas, igwe ojii ma weghachite ya na mbara igwe.
Onu ogugu radieshon nke gosiputara site na aru aru na ogwugwo ihe ojoo bu ihe a maara dika 'albedo'. Ya mere, anyị nwere ike ikwu nke ahụ ụwa-ikuku usoro nwere nkezi albedo nke 30%. Ọhụrụ dara dara ma ọ bụ ụfọdụ nwere oke ike mepụtara cumulonimbus nwere albedo nso 90%, ebe ọzara nwere ihe dị ka 25% na oke osimiri banyere 10% (ha na-amịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ radieshon niile ruru ha).
Kedu ka anyị si atụ radieshon?
Iji tụọ radieshon nke anyanwụ anyị natara n'otu ntabi anya, anyị na-eji ngwaọrụ a na-akpọ pyranometer. Akụkụ a nwere ihe mmetụta dị na mbara ala nke na-ebunye radiesị nke obere ogologo. Ihe mmetụta a nwere akụkụ ndị ọzọ na-acha oji na nke na-amịkọrọ ụzarị radieshon n'ụzọ dị iche. A na-edozi ọdịiche dị n'etiti ọnọdụ ndị a dị ka mgbanwe radieshon (tụrụ na watts kwa square mita).
Enwere ike ịchọta atụmatụ nke radieshon nke anyanwụ anyị na-enweta site n'ịtụle awa ole anwụ na-acha. Iji mee nke a, anyị na-eji ngwa eji akpọ heliograph. Nke a na-etolite site na iko iko nke gbadoro ụkwụ na mpaghara ndịda, nke na-eme dị ka nnukwu iko na -eme ka ọ dị elu, na-etinye uche radieshon niile a natara na isi ihe na-agba akwụkwọ teepu pụrụ iche gụsịrị akwụkwọ na awa nke ụbọchị.
Mbara igwe radieshon na ụba griin haus mmetụta
Na mbụ anyị kwuburu na ọnụọgụ nke radieshon nke na-abanye ụwa na nke na-ahapụ bụ otu. Nke a abụghị eziokwu kpamkpam, n'ihi na ọ bụrụ otu a, ọnọdụ okpomọkụ ụwa zuru ụwa ọnụ ga-abụ -88 degrees. Anyị chọrọ ihe ga-enyere anyị aka ijigide okpomọkụ ka anyị wee nwee ike nwee ọ temperatureụ na ebe obibi dị mma nke ga-eme ka ndụ dịrị na mbara ala. Nke ahụ bụ ebe anyị na-ewebata griin haus utịp. Mgbe ụzarị ọkụ nke anyanwụ rutere n’elu ụwa, ọ na-alaghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara laghachi na mbara igwe iji chụpụ ya na mbara igwe. Anyị ekwuola na igwe ojii, ikuku na ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe na-amịkọrọ obere akụkụ nke radieshon nke anyanwụ. Otú ọ dị, ego a e tinyere na ya ezughị iji nwee ike ịnọgide na-enwe okpomọkụ ma mee ka ụwa anyị biri na ya. Kedụ ka anyị ga - esi ebi na ọnọdụ okpomọkụ a?
Ihe a na-akpọ griin gas bụ gas ndị na-ejigide akụkụ nke okpomọkụ nke ụwa na-ewepụta na-alaghachi na mbara igwe. Igwe griin haus bu: alụlụ mmiri, carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides, sọlfọ oxides, methane, wdg Igwe griin ọ bụla nwere ikike dị iche iche iji nweta radieshon nke anyanwụ. Otutu ikike o nwere iji rata radieshon, karia ikpo oku o gha ejide ma ghara ikwe ka o laghachi na mbara elu.
N’akụkọ ihe mere eme mmadụ, nchikota nke ikuku gas (gụnyere nke kachasị CO2) na-arịwanye elu. Ebili nke mmụba a bụ n'ihi mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọkụ nke mmanụ ọkụ na ụlọ ọrụ, ike na njem. Ọkụ nke mmanụ ụgbọala dị ka mmanụ na kol, na-ebute CO2 na methane. Igwe ndị a dị na nsị na-arịwanye elu na-eme ka ha jigide nnukwu radieshon nke anyanwụ ma ghara ikwe ka a laghachi ya na mbara igwe.
A maara nke a dị ka griin haus mmetụta. Otú ọ dị, ịba ụba a pụrụ isi kwuo ya anyị na-akpọ griin haus ọ naghị arụpụta ihe, ebe ọ bụ na ihe anyị na-eme na-arịwanye elu okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na-arịwanye elu. Ka ọnụọgụgụ gas ndị a na-amịkọrọ ụzarị ọkụ na mbara igwe, ka ha ga na-ekpokwu ọkụ ma, ya mere, ka oke okpomọkụ ga-arị elu.
Anyanwụ radieshon na mgbanwe ihu igwe
A maara okpomoku zuru ụwa ọnụ n'ụwa niile. Ọganihu a na okpomọkụ n'ihi nnukwu njigide nke radieshon nke anyanwụ na-akpata mgbanwe na ihu igwe ụwa. Ọ bụghị naanị na ọ pụtara na nkezi okpomọkụ nke mbara ala ga-abawanye, mana na ihu igwe na ihe ọ bụla gụnyere ga-agbanwe.
Mmụba nke okpomọkụ na-ebute ọgba aghara na mmiri ikuku, oke osimiri, nkesa ụdị, usoro oge, ịbawanye oke ihe omimi (dika mmiri ozuzo, idei mmiri, ifufe ...), wdg.. Ọ bụ ya mere iji wee nwetaghachi ọnọdụ radiative anyị n’ụzọ kwụsiri ike, anyị ga-ebelata anwuru ikuku gas ma weghachi ihu igwe anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mgbasa anyanwụ
Ihu igwe na 2016 mebiri ọtụtụ ihe ndekọ
Mgbanwe ihu igwe na-eyi egwu ikpochapu mmiri anyị